Tareenka Mugen wuxuu Sameeyay $ 352 Milyan oo Doollar, Qoraa Sameeyay $ 19,201 - Kale
Mugen Tareen Filim Wuxuu Sameeyay $ 352 Milyan oo Dollar, Qoraaga Waxaa La Siiyay $ 19,201
Jinni dilaa: Mugen Tareen waa filim anime ah oo xaddiga waallida ah ee guusha ay jirto. Gaar ahaan waqti gaaban.
3 maalmood gudahood markii laga furay tiyaatarada, waxay kasbatay $ 40 milyan oo doolar.
Wadar ahaan, filimka tareenka Mugen ayaa dib loo sameeyay $ 352 milyan oo doolar. Ka dhigeysa filimka 3-aad ee iibinta filimka anime ee waqtiga oo dhan ah.
Laakiin dusha sare sawirku uma fiicna sida muuqata.
Koyoharu Gotouge, gabadha qoraa ahna qoraa Demon Slayer ayaa kaliya heshay $ 19K heshiiska.
Qaddar lagu mahadiyo, haa, laakiin dhab ahaantii waa qaddarin aan xushmad lahayn oo ah lacag guusha ka timid Demon Slayer.
Gaar ahaan marka laga hadlayo Guusha Mugen Tareen khaas ahaan.
Marka maxaa loo bixiyay qoraaga Demon Slayer qiyaas ahaan yar?
Sida lagu sharraxay Crunchyroll:
“Sugimoto wuxuu sharxay taas sababtoo ah Jinni dilaa: Kimetsu no Yaiba waa shaqadii ugu horeysay ee taxane ah ee 'Gotouge', waxaa loo arkaa inay yihiin qoraa cusub, sidaas darteed bixinta hordhaca ah ee loogu talagalay isticmaalka shaqada xuquuqda masraxa waxay u socon kartaa si aan caadi aheyn.
In lagu daro intaas, sida uu qabo Sugimoto, Tareenka Mugen waxaa kaliya la go'aansaday inuu noqdo filim inta lagu guda jiro baahinta hore ee Jinni dilaa: Kimetsu no Yaiba Taxanaha anime ee TV-ga, caan ka noqoshada xayeysiintu uma sarrayn sidii ay hadda tahay.
Labadan arrimood labaduba waxay ka dhigan yihiin, ugu badnaan, Sugimoto wuxuu ku qiyaasayaa khidmadda la siiyay Shueisha xuquuqda sheekada inay ahayd oo keliya 4 milyan oo yen ($ 38,372), iyadoo kaliya 2 milyan yen ($ 19,201) toos loogu aado Gotouge si loogu sii daayo masraxa . ”
The dhab ah Arrin baahsan oo ku saabsan qorayaasha manga ee Japan
Qorayaasha Manga iyo kuwa heysta xuquuqda daabacaadda ee Japan ma weydiistaan ​​xuquuq ku filan.
Habka loo dejiyo nidaamka ayaa taasi ka dhigaysa caqabad, dabcan. Laakiin waxaan la yaabanahay in badan oo aan mideyn oo dalban royalties shaqadooda. Haddii loo tixgeliyo qoraa 'cusub' iyo in kale.
Lacagta hore waxay umuuqataa mid wanaagsan, laakiin dhadhanka lacagta muddada dheer ayaa kafiican oo had iyo jeer waa xulashada ugufiican.
Kiiskan, Qoraaga Jinni Slayer waa qoraa cusub hadaba taasi waa qeyb ka mid ah sababihii mushahar yar loo siiyay. Mana helin mudnaan badan.
Shirkadaha su'aashu ma aysan dooneynin inay halis galiyaan maaddaama qoraagu uusan laheyn rikoor raadraac oo uu ka hadlo. Taasina waa cadaalad.
Laakiin xaqiiqda, sidoo kale waa sababta oo ah qoraagu ma garanayo wax ka fiican guud ahaan. Ama iyagu ma doonayaan inay dhibaato keenaan.
Ka dib oo dhan - waxay u sameynayaan jacaylka, maaha lacagta. Laakiin qiimahee waa su'aasha ay tahay inaad weydiiso.
Qorayaasha Manga sidaan horayba u soo jeediyay, waa inay dhisaan barnaamijkooda. Internetku wuxuu iyaga siiyaa wax-soo-saar haddii ay leeyihiin manga wanaagsan.
U dalbo gunno sare (ama royalties gabi ahaanba).
Mushahar badan sii.
Kala xaajood qandaraasyada wanaagsan.
Ku guuleysta heshiisyo wanaagsan.
Oo aad awood badan ku leedahay hawsha.
Haysashada madal waxay ku siinaysaa ka faa iideysi, taasoo ka dhigeysa qof walba inuu u yimaado adiga Kuu dhigaya boos awood.
Taasi waa fikirkeyga ku saabsan xaddiga Koyoharu Gotouge ayaa lasiiyay iyo qadarka filimka Mugen ee tareenka laga sameeyay wadar ahaan.
Porn Star Lacey London Oo Sheegtay Inay Waqtigeeda Ugu Badan Ku Bixiso Daawashada Anime!
Gabadh 16 Jir Aasiyaan Ah Oo Xidhan Shaati Buluug Ah Ayaa Lagu Waayay Harooyinka Springfield, Australia